wado fudud sidaad iskaga diiwaan gali laheed webkaan!!!!!!!!!!
Subject: wado fudud sidaad iskaga diiwaan gali laheed webkaan!!!!!!!!!! Wed Feb 24, 2010 7:27 am
maanta waaxaan jeclaaday wado fudud inaan idinku soo gudbiyo sidaad iskaga diiwaan galin laheed webkaan
1-waxaad tagaysaa kor meesha ay ku qorantahay التسجيل taabo meeshaas kadib warqad ayaa kuusoo baxayso warqaas ka taabo mesha ay ku qorantahay hoos I AGREE THESE TERMS.
2-waxaa kuusoo baxaayo sadax qaanadood waxaa ku qoree magacaa,iimeelkaada iyo passwordkaada kadib SAVE taabo kadib qaanad kale ayaaa kuusoo baxayso qaanadaas ku qor passwordkaada mar labaad.
3-kadib waxaad tagaysaa inboxkaada iimeelka aad isku diiwaan galisay xaanshada aan kuusoo dirnay aa waxaad ka raadinaysaa linki ay ku qorantahay websitkeena magaciisa kadib waan taabanee waxaa kuu soo baxayso warqad kuu cadayneesa inaad diiwaan gashantahay.
waa BinMaadow oo qeer idin rajaynaaya
salaamu calylkum waraxmatulaahi wabarakaatuh